एउटा इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् । – Khabar PatrikaNp
August 10, 2020 1081
इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Prevतत्काल उपत्यका भित्रिने सबै नाका सिल नगरेसम्म संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने चेतावनी
Nextविनय तारा फाउण्डेशन अस्पतालका सुरक्षागार्डको कोरोनाबाट मृत्यु
काँग्रेस गठबन्धन : राष्ट्रपति रामचन्द्र, सभापतिमा शशांक
विहानै देखिएका यस्ता चिजले दिनेछ तपाईलाई राम्रो संकेत…!
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15530)